Shiinaha warshad soosaarida aluminium iyo alaab-qeybiyeyaal | JIAXING
Albaabada aluminium dahaaran ee dahaaran iyo daaqadaha
Qalabka aluminium ee aan caadiga ahayn
Noocyada aluminium ee aluminium
Goobta Asalka: Shiinaha ama laga keeno
Shahaadada: Shahaadada Mill, SGS, ASTM, iwm
MOQ: 1000KGS ama 1000 astaamaha aluminium
Xirmo: Sariirta looxaanta ee dhoofinta ama Dacwada
Muddada Gaarsiinta: 30 maalmood gudahood ama sida ku xusan Amarka
Qiimo: Marka loo eego sicirka suuqa maalinta amarka la dhigayo
Sumadda: Qalabka Gudaha ama Dibedda laga keeno
Cabbirka Heerka: Dhererka waxaa loo habeeyay laga bilaabo 0.1 m ilaa 6 m iyadoo loo eegayo shuruudaha macaamiisha
Aluminium wuxuu muujiyaa caabbinta daxalka u fiican ee jawiyada badankeeda, oo ay ku jiraan hawada, biyaha (ama brine), kiimikada kiimikada, iyo nidaamyo badan oo kiimiko ah.
Noocyada Aluminium waxaa badanaa loo doortaa habdhaqankooda koronto ee wanaagsan. Iyada oo ku saleysan miisaanka loo siman yahay, waxqabadka aluminiumku wuxuu ku dhowaad laba jeer ka badan yahay naxaasta.
Kuleylka kuleylka ee Aluminium Aluminiumku wuxuu ku saabsan yahay 50-60% naxaas ah, taas oo u fiican soo saarista kuleylka, kuleyliyaha, qalabka kuleylka, maacuunta wax lagu kariyo, iyo madaxyada silsiladda gawaarida iyo radiators.
Noocyada Aluminiumku waa kuwo aan magnet ahayn, taas oo ah muuqaal muhiim u ah warshadaha korantada iyo korantada. Noocyada Aluminiumku isma shidi karo, taas oo muhiim u ah codsiyada wax ka qabashada ama taabashada waxyaabaha ololi kara iyo waxyaabaha qarxa.
Nooca aluminiumku wuxuu leeyahay qalab aad u fiican.
Awoodda jihada gaarka ah, dhalidda xoogga, ductility, iyo heerarka adkaanshaha shaqada ee u dhigma.
Aluminium si aad ah ayaa dib loo cusboonaysiin karaa, iyo sifooyinka aluminium dib loo warshadeeyay ayaa ah kuwa aan laga sooci karin aluminiumka aasaasiga ah.
Alaabada iyo Gaarsiinta: Waxaan haynaa badeecad nagu filan oo keyd ah, waxaan u soo bandhigi karnaa wax ku filan macaamiisha. Waqtiga hogaaminta wuxuu ku jiri karaa 30 maalmood gudahood wixii ku dhaca keydka.
Tayada: Dhamaan badeecada waxay ka yimaadeen soo saaraha ugu weyn, waxaan kuu soo bandhigi karnaa MTC-ga adiga. Waxaan sidoo kale bixin karnaa warbixinta tijaabada-saddexaad.
Custom: Waxaan leenahay mashiin jarid, cabbirka cabbirka ayaa la heli karaa.
Hore: qaybta aluminium
Muuqaalka dalladda aluminium
Ilkaha aluminium ilkaha
Qaboojinta baahinta kuleylka ee gabbaldayaha